Vatengi Vari Kuedza Kusvikira Iwe paSocial Media, Uripo Here? | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 3, 2014 Douglas Karr
5 kubva pane ese matanhatu zvikumbiro zvinoitwa nevatengi pasocial media kune bhizinesi enda usina kupindurwa. Mabhizinesi anoenderera mberi nekuita chikanganiso chinotyisa chekushandisa midhiya senhau senhepfenyuro pane kuona kukanganiswa kwayo senge yekutaurirana svikiro. Kare kare, makambani akaziva kukosha kwekutarisira inbound mafoni nekuti kugutsikana kwevatengi kunowanikwa zvakananga mukuchengetedza uye kuwedzera kukosha kwevatengi.
Vhoriyamu ye social media zvikumbiro zvakawedzera 77% gore pamusoro pegore. Asi mhinduro iyi ingori yekuwedzera kwe5% nemabhizinesi. Iri iburi rakakura! Nei zvikumbiro zvemagariro zvisiri kutariswa zvakafanana? Kufungidzira kwangu ndekwekuti vatengi havatarisire mhinduro sezvavanoita kuburikidza nefoni saka havasi kuzotsamwa sezvavanoita kana vakagara panhare isingapindurwe. Asi iyo mukana wemabhizinesi kunyatsoita hukama hwemagariro hwakakura mumaindasitiri mazhinji… kunyanya uchiziva kuti vakwikwidzi vako havateereri!
Pakati pegore rapfuura, mamwe mashura anoshamisa akabuda munhaurirano yemagariro enhau pakati pemakambani nevatengi. Iyo Yemabhizinesi Bhizinesi inopa kukurumidza kuongorora kweese ari maviri uye eindasitiri-akasarudzika mafambiro
The Nhungirwa Yemagariro Index chirevo chakanyorwa uye chakaburitswa neSoutout Social. Yese mareferenzi dhata akavakirwa pamakumi mapfumbamwe neshanu nemakumi mashanu neshanu manzanga eruzhinji (18,057 Facebook; 9,106 Twitter) yemaakaundi anoshanda aripo pakati peQ8,951 1 neQ2013 2. Anopfuura mamirioni zana nemamiriyoni mameseji akatumirwa panguva iyoyo akaongororwa nekuda kwemushumo uyu.
Tags: kutarisana nevanhumagariro ekuteerera zvimirosocial media zvikumbirobukira munzanganhungirwa yemagariro indekisi